AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf par GAZETY - Fichier PDF
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf .pdf
Nom original: AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf.pdf
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/01/2015 à 21:46, depuis l'adresse IP 197.149.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1992 fois.
Taona faha 15 - n° 115 – JANVIER 2015
Arahaba tratry ny Asaramanitra!
« Voninahitra anie ho an’Andriamanitra… ary Fiadanana ho an’ny olona ety ambonin’ny tany! ». Io hiran’ny Anjely nanome
Voninahitra Ilay Mpamonjy miara-monina amintsika ary manome lanja ny hasina maha-olona Zanak’Andriamanitra antsika
io no voalohan-teninay amin’izao taona vaovao izao.
Ny voalohan’ny volana Janoary , Andro Eran-tany ho an’ny Fandriamapahalemana sy ny Fiadanana. Ny hafatry ny Papa
Fransoà dia nampitondrainy ny lohateny hoe : « “Tsy toy ny mpanompo intsony fa rahalahy”.
(Filem.1, 15 – 16).
Miandrandra Fandriampahalemana tonga lafatra ny rehetra, indrindra ny Malagasy izay rotidrotiky ny adilahy pôlitika,
amin’ity taona 2015 ity : Fandriampahalemana sy Fiadanana miorina amin’ny Firahalahiana sy Fifankatiavana fa tsy amin’ny
herisetra sy fanjakazakan’ny Besandry. Tsy hisy anefa ny Fandriampahalemana raha tsy ny isam-pianakaviana, ny isantanàna, ny isam-piarahamonina, ny samy mpiray finoana no mampanjaka ny Fiadanana Nentiny iny. Fiadanana lavorary avy
amin-Janahary, araka ny hirantsika.
Kitro ifaharahan’ny Fandriampahalemana sy ny Fiadanana ny fanabeazana ny taranaka. Ankizy sy Tanora tia ny
fahadiovam-po, mandrava fankahalana sy ny rindrin’ny fisarahana, ary ho Fitiavana eo anivon’ny Fiangonana no tanjona
amin’izao JMJ Mada-8 izao.
Hoy Md Jean de Dieu : « Amin’ny tany tsy misy Fitiavana, mamafaza Fitiavana fa hioty Fitiavana ». Samia ho
Ny Ekipan’ny ADA
Homba anareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy
Tompontsika, sy ny Fitiavan’Andriamanitra Ray, ary ny Fiombonana ao amin’ny
Faly miarahaba anareo tsirairay isan-tokantrano, vita soan’ny taona 2014 ka tratry
ny taona vaovao 2015 : ny fankalazana ny nahaterahan'ilay Zanak’Andriamanitra
tonga olombelona hiara-monina amintsika anie hitondra fihavaozana eo amin’ny fiaina
ntsika tsirairay avy, eo amin’ny fiainam-pianakaviana tsirairay sy ny fiaraha-monina,
eo amin’ny fiainam-piangoanana sy Firenena, eo am-pamakivakiana ity taona 2015 ity.
Hatramin’ny taona 1967 no natokan’ny Papa Paoly faha-6 ho andro eran-tany ho
an’ny Fiadanana, ho an’ny Fandriam-pahalemana ny 1 janoary ka andefasan’ny Papa
hafatra ho fanentanana ny olona handala ny Fandriampahalemana.
Niainga avy amin’ny taratasin’i Md Paoly ho an’i Filemôna, ny papa Fransoà no
manolotra antsika ny hafany ho an’ity taona ity ka nomeny ny lohanteny hoe : ‚Tsy toy
ny mpanompo intsony fa rahalahy‛. Fa hoy tokoa manko i Md Paoly tamin’i Filemôna :
‚Angamba i Onesimo no niala teto aminao, dia ny mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny
mpanompo intsony, fa tsara lavitra noho izany, dia tahaka ny rahalahy malala.‛ (Filem.1, 15 –
Taona natokan’ny Papa Fransoà ho taonan’ny Fianakaviana, nanomboka tamin’ny 5 Oktôbra 2014, ary ho taonan’ny
Fiainana Voatokana, nanomboka tamin’ny 30 nôvambra 2014 ity taona ity. Ny Fiainana Voatokana, dia tsy inona fa ny
fiainan’ireo nanokana ny tenany sy ny fiainany ho an’Andriamanitra ao anatina Fikambanan-dRelijiozy na ao anatina
« Institut Séculier ». Ireo mivondrona ao anatina « Institut Séculier » iray dia ireo manokana ny tenany sy ny fiainany ho
an’Andriamanitra eo anivon’ny fianakaviany ary eo anivon’ny fiaraha-monina misy azy, mivelona amin’ny asa ataony, ary
mijanona eo anivon’izao tontolo izao, saingy tsy olon’izao tontolo izao.
Na ireo Relijiozy, na ireo « Institut Séculier » dia samy miara-monina anatina fianakaviana, anatina ankohonana misy
azy, natao hiaina toy ny mpiray tampo, noho izany fehezin’ny lalànan’ny fifankatiavana, fifanajana, fifandeferana,
Ka hoy ny Papa Fransoà ao amin’ity hafatra ho an’ny Andro eran-tany ho an’ny Fiadanana ity hoe : ‚fanirian’ny tsirairay
ny hanana fiainana tonga lafatra, ary ao anatin’izany ny hetahetam-pirahalahiana tsy mety lefy, te hiaina ny maha mpiray tampo, ka
manosika antsika hikatsaka fiombonana amin’ny hafa, izay tsy jerena ho fahavalo na mpifanandrina, fa toy mpiray tampo tokony horaisina
an-tanan-droa ary hofihinina eo an-tratra. Zavaboary natao hifandray amin’ny hafa ny olombelona, ary tsy afa-mivelatra maneho ny
maha-izy azy izy raha tsy eo amin’ny sehatry ny fifandraisany amin’ny olona sahala aminy, fifandraisana tarihin’ny rariny sy ny hitsiny
ary ny fitiavana ; noho izany, fototra iorenan’ny fivelarany ny fanekena sy ny fanajana ny hasina maha-olona azy, ny fanekena sy ny
fanajana ny fahafahany sy ny fizakan-tenany”.
Ampahatsiahivin’ny Papa fa raha nahary ny olona ho lehilahy sy vehivavy Andriamanitra, ka nitsodrano an’i Adama sy
Eva hitombo dia niteraka an’i Kaina sy i Abela izy ireo; mpirahalay iray tampo ireo fa kibo iray no nifonosany, mitovy
loharano nipoirana ary amin’ny maha-olona dia mitovy toetra sy hasina amin’ireo ray aman-dreniny, ary nohariana mitovy
endrika amin’Andriamanitra sy mifanahaka Aminy. Noho izany, noharîny hiaina ny fitiavana, hiaina ao anatin’ny fitiavana.
Ny famonoan’i Kaina an’i Abel dia maneho ny fitsipahana tanteraka ilay antso ho mpiray tampo, fitsipahana ny adidy
sarotra iantsoana ny olombelona hiaina ny fitiavana, hiaina ao anatin’ny firaisan-kina ary ny adidy hifampitsimbina.
Raha jerena ny fiainantsika ankehitriny dia miseho amin’ny fomba maro ny fitsipahana ny hiaina io fitiavana
naharian’Andriamanitra sy iantsoany antsika io; ka hoy ny Papa : ‚Ny tsy fanekena ny handray ny hafa, ny fampahoriana ny olona,
ny fanosihosena ny hasina sy ny zo fototra ananany, ny fampijoroana rafi-piainana miorina amin’ny tsy fitoviana, dia maneho ny
fandavana tsy te-hiombona, ka manome vahana ny fanandevozana amin’ny endriny maro”, eny fa na dia ao anatin’ny fianakaviana
Koa amin’izao taona natokana ho an’ny Fianakaviana izao àry, dia ilaina ny fibebahana itodihana amin’ilay Fanekempihavanana tanteraka tamin’ny fanoloran-tena nataon’i Kristy teo amin’ny hazofijaliana noho ny fitokisana fa « tao amin’izay
nahabe ny fahadisoana indrindra no nihoaran’ny fahasoavana ho ambony lavitra…, amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika » (Rom
5,20). Fa Izy, ilay « Zanaka malala » no indro tonga namboraka ny fitiavan’ny Ray ny taranak’olombelona. Koa na iza na iza
mihaino ny Evanjely ary mamaly ny antso mitaona azy hibebaka, dia tonga « rahalahy sy anabavy ary renin’i Jesoa » (Mt 12,50),
izany hoe tonga zanaka natsangan’ny Ray (jer Efz 1,5).
‚Ny ankohonan’ny mpino Kristiana àry, hoy ny Papa, no tena sehatry ny fiombonana, iainana ny fifankatiavana maha-mpiray
tampo. … Manaporofo izany rehetra izany dia ny Vaovao Mahafalin’i Jesoa Kristy, izay entin’Andriamanitra « manavao ny zavatra
rehetra », dia afaka manavotra ny fifandraisana eo amin’ny olona samy olona, ary isan’izany ny fifandraisan’ny andevo sy ny tompony,
amin’ny fampihariha riana ny zavatra iraisan’izy ireo, dia izy samy zanaka natsangana, atambatry ny rohim-pihavanana maha mpiray
tampo azy ireo ao amin’i Kristy”.
Koa mba ho taom-pahasoavana ho an’ny fianakaviana tsirairay àry ity taona ity dia ndeha hiara-mivavaka amin’ny
Fianakaviana masina isika: Ry Jesoa sy Maria ary Josefa ô, eo aminareo no ibanjinanay ny famirapiratry ny tena Fitiavana marina,
koa mitodika aminareo am-pitokiana izahay.
Ry Fianakaviana Masina tao Nazareta ô, ny Fianakaviana mba ataovy tonga sehatra anjakan’ny fiombonana, ataovy tonga
Senakla ianaranay mivavaka, ataovy tonga sekoly anovozanay fahalalana ny Evanjely, ary ataovy tonga Fiangonana kely ao antokantrano.
Ry Fianakaviana Masina tao Nazareta ô, enga anie ka tsy hisy intsony, na ovinana na oviana, ny fianakaviana mitondra faisana
noho ny herisetra, ny fianakaviana tsy mba mivelatra fa mikombona, ny fianakaviana misarabazana : ka izay rehetra nitondra ratra,
na sendra fanafintohinana anie, mba hahita fanalana alahelo sy fanasitranana haingana.
Ry Fianakaviana Masina tao Nazareta ô, enga anie ny Sinaoda nataon’ny Eveka momba ny Fianakaviana, mba hamohafoha ao
amin’ny olona rehetra ny fahatsapana fa masina ary tsy azo tohintohinina ny fianakaviana, ary hamohafoha ny fahatsapana ny
hakantony, araka ny nandaharan’Andriamanitra azy.Ry Jesoa sy Maria ary Josefa ô, mba henoy ary ekeo ny vavakay. Amen
+ Mgr RAKOTONARIVO Fidélis
ADA FANABEAZANA – FIBEAZANA MIAINA SY MITIA
1.TENY FILAMATRA IVELOMANA
Tsara ho teny filamatra entin’ny Mpampiofana ‚E.V.A.‛ ara-katesezy miaina sy manatanteraka ny fampiofanana
sahaniny, ireto Tenin’Andriamanitra ireto :
- ‚Mitafy ny fitiavana, izay fehin’ny hatsaram-panahy rehetra‛ (Kôl 3,14).
- ‚Mifandinika mba hampandroso ny fitiavana sy ny asa soa‛ (Heb 10,24).
- ‚Manao am-pitiavana ny zava-drehetra‛ (1 Kôr 16,14).
- ‚Mikely aina amin’ny asa soa rehetra sy manao am-pitiavana ny zava-drehetra, mba tsy haha-zava-poana izany‛ (1 Kôr
Mitsinjara anankiroa ny fampitana ‚E.V.A.‛ ara-katesezy, araka ny sokajin’ny olona anaovana izany, dia ny ho an’ny
olona Mpampiofana sy ny ho an’ny olona beazina mivantana. Ny fototra no misy tsy itoviany, fa ny sisa kosa mitovy ihany.
Toy izao izany fototra izany :
2.1.Ho an’ny olona Mpampiofana
Samy ilaina na ny mampita fahalalana maro mikasika foto-kevitra iray na ny mampita fanabeazana maro avy amin’izany.
Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia hoe : samy atao mibahan-toerana na ny fikarohana amam-pamakafakana ara-tsaina ny
foto-kevitra iray, na ny fomba fampanjariana an’izany ho toetra amam-pitondran-tena.
2.2.Ho an’ny olona beazina mivantana
Ny fanabeazana no atao mibahan-toerana kokoa fa tsy ny fampianarana ; izany hoe tsy ny fikarohana sy ny
famakafakana ary ny fahalalana ara-tsaina momba ny foto-kevitra iray no tena zava-dehibe asongadina, fa ny fampanjariana
izany ho toetra amam-pitondran-tena. Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia hoe : tsy ny famelabelarana ny foto-kevitra
amin’ny lafiny ara-pahalalana (ara-tsaina) no andaniana ny ampaham-potoana betsaka ampitana ny ‚E.V.A. ara-katesezy‛ fa
ny fahazoan’ny olona beazina mampihatra eo amin’ny fiainany andavanandro ny hevitra raketin’ilay foto-kevitra.
Tsy maintsy lanjalanjaina sy arindra araka an’ireto ihany anefa izany : ny fahalalan’ny olona beazina, ny traikefany, ny
filàny, ny fiainany.
Raha fanabeazana ny olona amin’ny ‚E.V.A. ara-katesezy‛ izany no atao, dia efa ampy ny foto-kevitra iray na anankiroa,
mandritra ny herinandro na iray volana mihitsy aza, mba ho latsa-paka tsara eo amin’ny fiainany. Tsy mety amin’ny
fanabeazana manko ‚Ny manao soron’afon’ Ikala adala, ka ny eo aloha tsy levona, ny eo aoriana asesika ihany‛. Tsy mahomby loatra
Ekipa EVA Diôsezy
AINA SY HEVITRA
Ny fiarahamonina sy ny Fiangonana
Tsy afa-misaraka na miala amin’ny fiarahamonina ny fiainanan’ny olombelona. Natao hitaiza sy hamehy ary hamolavola
azy mantsy ny fiarahamonina. Etsy andaniny, ny Fiangonana, fiarahamonina iray tsy azo idifirana noho izy mitaiza ny arampanahin’ny tsirairay sy miantoka ny fampivelarana na hoe fampandrosoana ny olombelona sy ny olona manontolo.
Mikolokolo sy mitaiza ny
endrik’Andriamanitra nahariana ny olombelona. Ny fiahiana ny ara-panahy no zokindraharaha amin’ny asa anirahana ny Fiangonana eo anivon’izao tontolo izao. Ny fanahy rahateo no olona hoy ny ‘Ntaolo.
Marina fa ny mitory ny ‚Vaovao Mahafaly‛ no voalohan’adidin’ny Fiangonana. Amin’ny maha mpanafaka Azy anefa
(Lk 4), dia tsy azony atao velively ny hiraviravy tanana hijery maso fotsiny manoloana ireo tsy rariny mianjady amin’ny
fiarahamonina. Ny tebitebin’ny olombelona ankehitriny dia tebitebin’ny Fiangonana ihany koa. Miray hina sy miara-milanja
izay manjo ny olombelona ny Fiangonana, araka ny foto-pampianaran’ny Kônsily “Gaudium et Spes” na ny Fiangonana
manoloana ny Andro ankehitriny. Satria tokoa, tsy ny hanalan’ny Ray ny Fiangonana amin’izao tontolo izao no nangatahin’I
Kristy taminy fa ny hiarovany azy amin’ny Ratsy (Jo 17).
Ny Papa Paoly hafa-6 aza, izay natsangana ho olontsambatra vao tsy ela akory dia sahy nanambara fa “ny politika dia
asa fitiava-namana ambony indrindra”. Tsy tokony ho mpitazana kanosa fotsiny àry ny Fiangonana manoloana ny rafipiaraha-monina hita fa marefo eto amin’ny firenentsika ankehitriny. Ny Fiangonana irery ihany no hany rafitra tokana azo
antoka fa hahomby amin’ny fandaminana ny fiaraha-monina, noho izy tsy mitanila, mpampihavana azo antoka ary
vavolombelona mahatoky manambara sy mitory ny Fitiavan’Andriamanitra.
Aoka tsy hatahotra ny hiady sy hitolona ho an’ny fanafahana ny olona amin’izay mangeja azy ny Fiangonana, amin’ny
maha sakramentam-pamonjena azy. Efa manao isika amin’ny vaomieran’ny Rariny sy ny Fiadanana. Ho avy izao ny
fifidianana, ka anjaran’ny Fiangonana ny manazava ny sain’ny olona hanana safidy mazava.
Aoka hotsaroana mandrakariva ilay hira hoe “Fantratray fa miasa Ianao, manomana izao tontolo izao ho vaovao. Ny
asanay atolotray, miara-miasa Aminao izahay”. Ny lahika indrindra, izay zanaky ny Fiangonana, miray petsapetsa akaiky
kokoa amin’ny Fokonolona, no manana ny anjara hitondra ny fahazavan’ny Evanjely eo anivon’ny fitondrana raharahambahoaka.
Misoa sy Ramarisely
“Sambatra ny madio fo,
fa hahita an’Andriamanitra”
Fotoan-dehibe ho an’ny Fiangonana Katôlika eto Madagasikara ny fankalazana manetriketrika ny fihaonambe
nasiônalin’ny tanora hatao any Fianarantsoa ny 15 hatramin’ny 20 Septambra 2015 ho avy izao. Fotoana fanehoana
fiombonana, indrindra ny finoana io. Mila entina am-bavaka izany mba tsy ho fihetsiketsehana ivelany fotsiny fa tena ho
tonga nofo, zary fiainana ho an’ny rehetra. Indro ary entina etoana ny vavaka hasiviam-bolana hataontsika hiatrehana azy:
Ry Andriamanitra Ray ô, misaotra Anao izahay;
Noho ny JMJ mampiombona anay.
Mankasitraka Anao indrindra koa,
Nanome an’I Masindahy Joany Paoly II,
Izay angady nananana sy vy nahitana,
Ny “Andron’ny Tanora Manerana ny Tany”,
Sy masimbavy Terezin’I Jesoa Zazakely
Mpamangy anay, tsy manadino velively.
Natolotry ny Papa Fransoà,
Hiainan’ny tanora manerana ny tany
Amin’ity taona 2015 ity,
Ny Tenin-Janakao, fanilo ho anay, hoe :
“Sambatra ny madio fo, fa hahita an’Andriamanitra”
Atolotray anao ny fonay, ka diovy,
Apetrakay eo am-pelatananao indray
Ity JMJ faha-8 eto aminay ity
Fa haren’ny Fiangonana sy ain’ny Firenena.
Rotsahy ny fanahinao ny isan-tanàna,
Afaho amin’ny fatorana ataon’i Satàna,
Herezo tsy ho lavon’ny fakam-panahy;
Handry fahalemana tsy hisy manahy.
Iraho izahay hiaina am-pinoana
Sy Fanantenana ary Fitiavana marina,
Ny hazofijaliana namonjenao anay:
Hampivoatra ny tontolom-piainanay,
Hijoro amin’ny marina hatraiza hatraiza,
Handala fihavanana sy hifampitaiza,
Hanaja ny aina sy ny zo maha-olona,
Ary ny soa iombonana.
Miaraka amin’I Masina Maria Reninay
Kintan’ny Fanantenana izahay,
No mitalaho izany Aminao.
Ny votoatin’ny vavaka voatanisa ireo no tanjona kendrena sy ezahina ho tratrarina amin’ity JMJ andiany faha-8 ity,
Isika Ambositra no Diôsezy akaiky indrindra an’I Fianarantsoa, koa ny Agnarandray tsa afify ny zara tsa atolotra ny
hafa, samia mifanentana ho tonga maro.
Ny Ekipa ADA
CAN 2015, ANDRIANY FAHA-30
Noho ny fifanolanana teo amin’ny CAF sy ny firenena marôkanina izay voafidy hampiatrano ny CAN 2015, dia tapaka fa
I Guinée Equatoriale indray no handray ny fiadiana ny Tompon-dakan’I Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra andiany
I Afrika Atsimo moa no firenena nampiatrano azy farany teo. Hanomboka ny sabotsy 17 janoary ho avy izao ny
fifanitsanana ary tsy hifarana raha tsy ny 8 febroary 2015. Hotontosaina amin’ireto kianja 4 lehibe ireto ny lalao rehetra : Bata,
Malabo, Mongomo, Ebebiyín.
Toy izao ny fizotry ny fifaninanana :
Ho an’ny Vondrona A :
Sabotsy 17 janoary :
Guinée Equatoriale sy Congo, ary Burkina Faso sy Gabon.
Ny alarobia 21 janoary :
Guinée Equatoriale sy Burkina Faso, ary Gabon sy Congo
Alahady 25 janoary :
Gabon sy Guinée Equatoriale ary Congo sy Burkina Faso
Ho an’ny Vondrona B:
Alahady 18 janoary 2015 :
Zambie sy RD Congo, ary Tunisie sy Cap-Vert
Alakamisy 22 janoary :
Zambie sy Tunisie ary Cap-Vert sy RDC
Alatsinainy 26 janoary :
Cap-vert sy zambie , ary RDC sy Tunisie
Ho an’ny Vindrona C :
Alatsinainy 19 janoary :
Ghana sy Sénégal, ary Algérie sy Afrika Atsimo
Zoma 23 janoary :
Ghana sy Algérie, ary Afrika Atsimo sy Sénégal
Talata 27 Janoary :
Afrika Atsimo sy Ghana ary Sénégal sy Algérie
Ho an’ny Vondrona D:
Talata 20 janoary :
Côte d’Ivoire sy Guinée, ary mali sy Cameroun
Sabotsy 24 janoary :
Côte d’Ivoire sy Mali, ary Cameroun sy Guinée
Alarobia 28 janaoary :
Cameroun sy Côte d’Ivoire, ary Guinée sy Mali
Ny Teraky ny Mpahatsiahy
Fanentanana sy fampahafantarana
Mompera Luc Pierrot, voaantso ho Apôstôlin’i Jesoa Kristy, noho ny sitrapon’Andriamanitra, mamangy ny
mpino tafaray ao amin’i Kristy Jesoa, ato amin’ny Eglizy masin’Andriamanitra, Distrika Ambinanindrano. Ho aminareo
anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo !
Lahaly e! Arahaba tratry ny Asaramanitra 2015 tsiena! Izao taona vaovao izao anie hitondra soa sy fanambinana ho
antsika. Lasa iny ny taona 2014, taona nahitantsika fahombiazana sy nanaovantsika ainga vao teo anivon’ny pastôralin’ny
tanora. Niaraha-nanao sy niaraha-nahita ary niaraha-niainana ny ezaka samihafa nifarimbonantsika: rakitra, fety, fanasana,
vokatra sy ny sisa. Toa nanery sy niteny mafy anareo aho, kanefa tsarovy sy banjino fa ny hahasoa anareo sy ny taranakareo
no imatimatesako sy arovako toy ny anakandriamaso, ka ahasahiako milaza hoe « Isika tsy naman’izay mihemotra, àry
tsiena tsy mipody vato zinera ». Aza raisinareo ho tenin’olombelona ny teniko fa miteny amin’ny maha mpaminany aho,
bitsiky ny Fanahy Masina no ampitaiko aminareo. Koa mitohy àry ny ezaka. Dingana lehibe sy goavana no miandry
antsika. Hasehontsika amin’ny mpiarabelona eran’ny faritra Ambinanindrano sy ny vahoaka manerana ny tany tontolo fa
AFAKA MANAO ZAVATRA ISIKA REHEFA VONONA, ARY MAHAVITA REHEFA MANAO.
Alao hery àry, fa manakaiky ity ilay andro lehibe hihaonantsika amin’ny tanora manerana ny Nosy.
ny HIVONDRONA ISAM-PIANGONANA,HIKATROKA ANATY FIKAMBANANA MASINA, HAFANA FO AMIN’NY
NY VAOVAO MAHAFALY, TSY HITSOAKA ADY AMIN’NY FANAKIVIANA AVY AMIN’NY
MPANATSATSO, ARY HANARAKA IREO LAMINA SAMIHAFA ATO AMIN’NY DISTRIKA amin’izao ezaka JMJ
irahantsika mifarimbona sy mifanome tanana izao.
Miala tsiny amintsika mpiara-miasa akaiky: Katesista Sasany, fa toa isika indraindray no tsikaritra sy voamarika ho vato
manoa riana, vato misakana mihitsy aza, amin’ny fampandrosoana ny Pastôralin’ny tanora izay ifoforanay mafy, toa
manamaivana ny prôgrama ifametrahana ato amin’ny Distrika, tsy mampita ny toro marika ifametrahana amin’ny
fivoriana, mitelin-kafatra, tsy miraharaha angamba na tsy mahatakatra ny hahasoa ny kristianina. Tsarovy fa ao amin’ny
Fiangonana iadidianao ao, dia ianao no solotenan’ny Pretra manao ny raharaha fampianarana ny mpino, fitantanana ny
vahoakan’Andriamanitra, mpanamasina ny andian’ondrin’ny Tompo.
Omeo tanana ny Pretranareo, aza avela hiasa irery, hararaoty ny hafanampo asehonay fa sao maty vao ramalala. Na
izany aza anefa, isaorana sy ankasitrahana ary deraina ianareo ekipa mpiara-miasa: Katesista efa tonga saina sy resy
lahatra, mampiseho fahavonononana ary mahatsapa ny maha laharam-pahamehana ny pastôralin’ny tanora ato amin’ity
Distrika malalantsika ity satria ireo no miantoka ny ho avin’ny Fiangonana. Hoy ny ‘Ntaolo, ny biby tsy mandeha raha tsy
ny lohany, ary ny taotrano tsy efan’ny irery. Samia mitondra ny anjara birikiny avy, samia manao ny manadrify azy fa ny
etan-jaraina mora zaka ary ny mita be tsy lanin’ny mamba. Alao tahaka ny vitsika sy ny tantely amin’ny fanehoana
firaisankina, matoky anareo ny Fiangonana.‛
“Manekea ny lehibenareo, àry ankatoavy ny teniny, fa miambina ny fanahinareo toy ny olona mbola hampamoahina
izy ireo, mba ho an-kafaliana no hanaovany an’izany, fa tsy ho amin’alahelo, fa tsy mahasoa anareo izany. Mivavaha ho
anay, fa te-hanao tsara amin’ny zavatra rehetra izahay, ary matoky fa marina ny hitsim-ponay‛. Heb 13, 17-18
Atolotr’I FANGITSE NY AINA
Tantsaha ny 98%-n’ny mponina. Ny fanaovana toaka no fidiram-bola voalohany. Mahavita hatrany amin’ny 40
tanika isan-taona ny fianakaviana iray rehefa tena milofo : valonjato litatra mahery. Noho ny haratsian’ny lalana sy noho ny
hamaroan’io vokatra io anefa dia amidy mora ny toaka. Izany hoe toa iharan’ny fanararaotana ihany ny mpamokatra. Na
dia be toaka aza anefa aty dia toa tsy dia mba ahitana olona firy mamo eny an-tsena na eny am-pivoriana na any an-tokantrano na eny am-pitenehana. Nefa ara-tantara dia tena nisotro tokoa ny olona teo aloha.
Araka ny fanadihadiana natao dia telon-jato zerikanina na « bidon » (mahalany 20 litatra) no tonga eo an-tsena
isaky ny tsena. Misy tsena in-telo isan-kerinandro anefa : talata, alakamisy, sabotsy. Noho izany dia manodidina ny
sivanjato zerikanina isan-kerinandro ny toaka tonga ao an-tsena. Betsaka ihany koa ny voly vary sy ny voly kajaha, ny voly
katsaka sy tsaramaso. Tany mamokatra ka izay atao mety avokoa. Misy tanim-bary sasany azo anaovana voly vary indroa
na intelo isan-taona. Na izany aza dia tsy maharaka ny filan’ny mponina ny voka-bary. Ka dia miandry ny famatsiana arabary avy aty ambony indraindray.
Ahitana voan-kazo isankarazany koa : laotisia, manga, mananasy ; saingy ny akondro no tena mitobaka. Azo
vidiana ariary zato ny telo. Misy ihany koa ny kafe saingy toa efa antitra ka tsy mamokatra tsara intsony. Ny fary no tena
mameno ny vohitra sy ny tanàna. Izay alehanao fary avokoa na antsaha na an-tanàna. Tsy dia tena foto-pivelomanany
fiompiana fa fanampiny fotsiny ihany.
ANTILIN’I MADAGASIKARA – DIOSEZY AMBOSITRA
Notontosaina ny 20 hatramin’ny 27 desambra 2014 lasa teo ny lasy ketsa nokarakarain’ny Diosezy Ambositra,
natao tao Tsararivotra Fiangonana Md Maurice. Izany dia fanofanana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Nisy
mpizaika avy amin’ny Diôsezy hafa tamin’ity fihaonana ity. Nisy avy any amin’ny Diôsezin’Antsirabe, teo koa ireo avy
amin’ny Diôsezin’I Fianaranatsoa tapany avaratra.
Toy izao ny salan’isan’ny mpizaika: Mpampiofana : 06; Lasiketsa : 48 ; Zaha : 13 ; Salohimbary : 15
Samy nanana ny lohahevitra nohalalinina avy ireo sokajy ireo. Singanina manokana amin’izany fa ao amin’ny Lasiketsa
dia nanana lohahevitra 12 izay novoaboasana.
Teo amin’ny Salohimbary dia navoitra fa mandritra ny 18 volana no hanaovan’izy ireo ny asa hahazoan’izy ireo
tapaporohana 2 (TP 2), mitovy lanja amin’ny BACC. Ny TP3 dia manana lentana ‚Licence‛ ara-panjakana mari-pahaizana
omena ny mpianatra ambony eny amin’ny Oniversite.
Tao amin’ny Paroasy Md Piera sy Paoly Ambohimiadana no nankalazana ny fetin’ny Noely. Nofaranana tamin’ny
fizarana Fanamarinam-piofanana (Certificat) ho an’ireo izay nahafeno fepetra ny fotoana tamin’ny Sabotsy 27 Desambra
Marihina fa hisy ny fanavaozana ny biraon’ny Diôsezy eo anivon’ny Antilin’I Madagasikara, amin’ny 18 Janoary. Tsy
fidina moa fa tendrena ny Filohan’ny Diôsezy. Mandalo filan-kevitra Diôsezy avy eo ary ankatoavin’ny Eveka. Aorian’izay
vao miakatra any amin’ny Filoha iombonana. Ny teny filamatra amin’ity taom-pikatrohana 2015-2016 ity, ho an’ny Antily
Diôsezy dia hoe :
Entanina ary isika mpikambana mbola tsy nanaraka fiofanana mba handray anjara amin’ireny fa mahasoa antsika. Koa
hararaoty ny fotoana fa aza mijanona amin’ izao fotsiny.
VOVONAN’NY TANORA KATOLIKA
Hafaliana vokatry ny fihaonana tamin’I Jesoa Mpamonjy no nitsenan’ny Vovonan’ny Tanora katolika Andina ny taona
vaovao 2015. Tontosa ny sabotsy 03 sy Alahady 04 janoary teo ny fifampiarahabana sy firariantsoa tratry ny Asaramanitra.
Tanora 402 avy amin’ny Fiangonana 09 no tonga niara-nifampizara hafaliana tao amin’ny renivohitry ny Distrika nandritra
io roa andro io.
Ankoatry ny hetsika maro nandravaka ny fety izay nahaliana ny maro dia nisongadina ny nananganana Birao vaovao
hitantanana ny Vovonana mandritra ny telo taona indray. Fito ny ekipa vaovao ka I Mme Myriamme avy amin’ny
Fiangonana Ampiterena no Filoha, Raivo Florine avy eto Andina ny Filoha lefitra, Réné avy amin’ny FET no Mpitambola,
manampy azy John avy ao Ivony, Faliana avy amin’ny AIM ny Mpitantsoratra ary Rosette avy amin’ny FIM no manampy
azy. Mamy avy any Ihadilanana kosa no Mpanolotsaina. Isaorana ny ekipa teo aloha izay nahafoy tena tamin’ny
fanompoana ny namany. Mirarisoa ny Ekipa vaovao hahavita be fa tsy misy tsy ho hain’Andriamanitra atao rehefa miasa ampinoana sy fitiavana.
Nanatrika sy nanome aina ny fotoana rehetra ny mopera curé, ny mopera vikera izay RAP ary ny frera ZAP ny
Vovonana niaraka tamin’ny Raimandreny tao amin’ny Distrika ary kristiana marobe. Samy faly ny rehetra, nahazo hery
hoentina hiatrika ny taona manontolo. Fahombiazana ireny ka ankasitrahana ny mpandray anjara rehetra. Antenaina fa
hihoatra an’izany ny fotoan-dehibe manaraka amin’ny Sampankazo. Anjaran’ny Fiangonana 07 any Ihadilanana indray
amin’ny 17-18 ho avy izao. Samia manaraka ‚pirograma‛.
Ny Birao VTK
FANDALOVAN’I MB TEREZY
SY NY RAY AMAN-DRENINY
« Ho fitiavana aho eo anivon’ny Fiangonana...Sambatra ny madio fo fa hahita
Higadona eto Madagasikara ny relikan’i Mb Terezi n’i Jesoa Zazakely
sy ny an’ny Ray aman-dreniny samy Olontsambatra. Ny 3 Jolay 2015 no
hahatongavany ao Antsiranana. Haharitra telovolana ny famangian’izy telo
mianaka ny Nosintsika. Ny 1 Oktobra, sady fetin’i Mb Terezy rahateo vao
hanainga hitodidoha hihazo an’i Eôrôpa ny sisantaolany.
Mitety faritra maro eto Madagasikara izy ireo.
Tsy diso anjara amin’ny famangiana isika eto Ambositra ny faha 30
Aogositra hatramin’ny voalohan’ny volana Septambra.
Ankoatr’izay dia fihaonan-dehibe ihaonany amin’ny tanora rehetra
manerana ny Nosy, mandritra ny 6 andro, ny JMJ Mada-8 ao Fianarantsoa (1520 Septambra 2015).
Fahasoavana miampy fahasoavana izany ka aoka hiomana sahady
dieny izao. Ento am-bavaka !!!
Ny fo misionera tao amin’ity Olomasina ity anie hanetsika antsika
handray an-tanana ny finoantsika!
Taom-baovaon’ny VTKDIM !
Miarahaba antsika mianakaby agnay Vovonan’ny Tanora Katôlika Imady Maintinandry tratry ny taona vaovao.
Ambohim-pihaonan’ny tanora teto amin’ny renivohitry ny distrika ny 02, 03 ary 04 Janvie lasa teo. Nankalaza amin’ny
fomba manetriketrika ny taona vaovao ny tanora tao anatin’io telo andro io. Miisa 550 ny tanora tonga namaly ny antso.
Nosokafana tamin’ny Sorona Masina ny fihaonana ny zoma 02 hariva. Lahadinika ara-panahy sy mahakasika ny
tontolom– piainan’ny tanora izay niarahana tamin’i RP. Nônne no nandravaka ny sabotsy tapany maraina. Masaka teto ny
ambiansa ary nafana ny adihevitra. Ny tolakandro kosa dia fifanitsanana baolina kitra izay nifanandrianan’ny isampiadidiana. Marihina moa fa mbola hitohy io lalao io any amin’ny JMJn’ny Distrika. Ny takariva dia korana miavaka. Samy
efa nanomana hetsika ny isam-piangonana ary dia samy nanao zay ho afany ny rehetra amin’ny fanehoana hafaliana.
Nofaranana moa ity lagnonam-be ity tamin’ny alalan’ny Lamesa izay niombonana tamin’ny kristiana. Samy naneho ny
fahafaham-pony ny tsirairay ary dia efa naneho ny fahavononany fa mbola ho avy indray hanamasaka ny . JMJn’ny
Distrika zay hatao any Maintinandry. Nentanina ihany koa ny rehetra hisoratra anarana amin’ny JMJ Mada VIII, tanjona
rahateo moa ny hahatonga solotena maro any avy aty amin’ny Distrikan’Imady-Maintinandry.
Misimisia re ny hoatra an’izay e. Mazotoa aby!
Tsara ho fantatra fa nampihetsi-po tokoa ny nahita izy efatra mirahalahy Filoham-Piangonana tonga daholo ary
nifanaraka tsara sy nifankahazo am-po. Môdely ho antsika samy Kristianina entin’izy ireo izany.
Tao anatin’ny tatitra isa-Poibem-Piangonana no nampahalalan’i Mgr Odon RAZANAKOLONA fa miatrika ny
taona ho an’ny Fianakaviana ny EKAR amin’ity taona pastoraly ity ary anasana ny Fiangonana rahavavy koa mba samy
hiara-mientana hanamafy orina ny fifankatiavan’ny mpianakavy sy ny fanamasinana ny fianakaviana.
Nambarany koa ny fiomanan’ny EKAR amin’ny JMJ Mada izay hatao any Fianarantsoa amin’ny volana Septambra
2015. Ankoatra izay, fantatra koa fa hankalaza ny jobily faha-500 taonan’ny ‚Reformasiona‛ nataon’i Lotera ny FLM
amin’ny taona 2017.
Mieritreritra ny hanamasina (Ordination) ny Pastora vehivavy izy ireo. Nisy masera (Mamre) nanao voady farany
kosa ny tao amin’ny FJKM tamin’ity taona ity. Ny EEM moa dia efa manana ireo maserany antsoina hoe FMJK na
Fikambanan’ny Mpanompovavin’i Jesoa Kristy.
Tsangambato lehibe iray hanamarihana izao jobily faha-35 nisian’ny FFKM izao ny fananganana Ivotoerana
Eokimenika eto Madagasikara.
Ifarimbonan’ny Fiangonana efatra ny fampandehanana azy ary ho Oniversite hanovozam-pahalalana mikasika
manokana ny Eokimenisma izy ity. Koa anasana antsika zanaky ny Fiangonana Kristianina rehetra izany, na ny EKAR, na
ny EEM, na ny FLM, na ny FJKM.
Farany, tsara ho fantatra ihany koa fa tapitra amin’ity volana Desambra 2014 ity ny fe-potoana itondran’i Mgr Jaona
(EEM) ny FFKM. I Pastora Lala Rasendrahasina (FJKM) indray no hitantana izany manomboka ny volana Janoary 2015 ho
Nisy tokoa ny hafatry ny FFKM ho an’ny Kristianina sy ny Malagasy rehetra tamin’izao Komity Foibe faha-37 izao.
« Mahareta amin’izay zavatra
Nianaranao, satria fantatrao ireo
nampianatra anao »
Ny hafaliana vokatry ny Noely no ifampiarahabantsika tratr’ity taona vaovao 2015 ity. Arahaba tratry ny taona e! Ho
taom-pahombiazana ho antsika rehetra anie ity taona vaovao vao miantomboka ity, indrindra irariana anareo mpianatra
rehetra tsy ankanavaka mba hamokatra zato heny ny ezaka amam-pilofosana ataontsika.
Ity Tenin’Andriamanitra hoe : “Mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra… ampianaro izy hitandrina ny zavatra
rehetra nandidiako anareo, ary indro aho eo aminareo mandrakariva mandra-pahatapitr’izao tontolo izao” (Mt 28, 18-20), ity no tiako
Irahin’i Jesoa tokoa isika hizara ny fahasoavana noraisintsika, amin’ny maha TA.MPI.KRI antsika. Tsy fanao ny mitazona
ho an’ny tena irery ny soa azo.
Telovolana faharoa sahady isika izao: koa mifanampia ary mifanentàna koa, indrindra amin’ny fianarana. Iriko sady
tiako ny hanokananareo fotoana hivoriana isan-tsokajy mba hahafahanareo hifampizara izay fomba hanatsarana ny
fianaranareo. Samia mahereza avy ry
zandry malala! Ny tsodranon’Izy Tompo anie hampamokatra ny ezaka rehetra
“Fa tsy misy tsy ho hain’Andriamanitra atao” Lk 1,37b
Fanamby lehibe no miandry ny Distrika amin’ity taona 2015 ity. Fiangonana folo no mitambatra ho distrika
Andakantany: Andakantany, Antsahakely, Ankorona, Ampanetoana, Voenana, Ambalambositra, Morarano, Tanandava,
Andohatsindra ary Soanierana.Vitsy an’isa hany ka mbola marefo sy miana-mamindra amin’ny lafiny maro. Porofo lehibe
ny hoe mbola itambarana amin’ny Distrika Andina hatreto ny Pretra miadidy ny faritany. Hetahetan’ny Kristianina
amin’izao taona 2015 izao ny hahatonga azy ho Distrika misionera mahaleotena.Mitaky adidy sy fandavan-tena izany.
Fanamby lehibe miandry ny herivelona rehetra ato amin’ny Distrika àry ny mba samy hisikimponitra hanefa ny
tandrify azy, hampitombo ny fandraisana andraikitra sy hampandroso ny fiainam-pinoan’ny vita batemy rehetra. Tsy diso
anjara amin’izany ny Vovonanan’ny Tanora Katolika. Ireto no ezaka tianay hotratrarina ho fandraisanay anjara amin’izany :
miditra Fikambanana masina, mikatroka, mafana fo, tsy mitsoak’ady ary manaraka pirograma. Ezaka voalohany ny
fanamafisana ny fiainam-panahy (recollection talohan’ny Noely tao Ankorona nahavory olona 150 eo), fifampiarahabana tratry ny
taona vaovao hanamafisana ny fiombonana hatao any Andakatany ny 24-25 janoary ho avy izao.
Miomana dieny izao ihany koa amin’ny fankalazana ny Sampankazo hatao ao Antsahakely fa io no faratampony
amin’ny hetsika rehetra ato amin’ny Distrika. Tsy ataonay ambanin-javatra etsy andaniny ny fanomanana ny JMJ faha 8
hatao any Fianarantsoa. Hiragasy roa tonta goavana no hatolotra ny vahoaka, hatao ao Ambatomarina ny andro tsena 07
avrily 2015 ho fanamaivanana ny tanora amin’izany. Mifanetana ny rehetra hanamasina ny andro Alahady, hivelona ny
Sakramenta fa taonan’ny Fianakaviana izao.
Ny fampiroboroboana ny Fikambanana masina ihany koa atao vaindohan-draharaha. Eo an-dalana ny fanokafana ny
AIM, ny FIM sy ny FTMTK ary ny TAMPIKRI ankehitriny. Raha tanteraka araka ny tokony ho izy ireo dia inoana fa
mendrika ho Distrika mahaleotena amin’izay ny Distrika Andakantany,
ary matoky satria ‚Tsy misy tsy ho
hain’Andriamanitra atao‛ Lk:1,37.
AKON’NY DIOSEZY AMBOSITRA
Gazety miseho isam-bolana
BP 127 – EKAR ANDREFANTSENA
306 – AMBOSITRA
P. Jeannot Kajy
Tél : 0348078200 - 0332036043
Fanoratana sy fandrindrana an-tsoratra:
Conception de ce format PDF : Fr Marcel, Régent
En la date de 08 janvier 2015
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf.pdf (PDF, 1.3 Mo)
olona tonga taona tamin distrika andriamanitra rehetra fitiavana janoary fiangonana tanora fianakaviana jesoa vaovao izany
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00292325.